New MyTelenor App
တယ်လီနောရဲ့ MyTelenor app 3.18 ရဲ့ “များများသုံး များများရယူ” ။ သင့်ကို ပိုပိုပြီး အသုံးပြုချင်အောင် စွဲဆောင်နိုင်မယ့် ဒီဇိုင်း အသစ်တွေနဲ့ များများသုံးလေ ဆုများများရလေ အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ MyTelenor 3.18 ဟာ telco app တွေထဲမှာ ပထမဆုံးဘဏ်ငွေပေးချေမှု၊ အကြွေးဝယ်ကတ်များနဲ့ ပေးချေနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်များ ပါဝင်လာတာကြောင့်တယ်လီနောရဲ့ အစီအစဉ်အားလုံးကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Shal Suboo 700MB, 925MB, 1500MB ကို MyTelenor app မှဝယ်ယူပြီး Shal Shake ခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်​တာနက်​၊ ဖုန်းပြောချိန်​၊ sms တို့ကို လိုအပ်​ချက်​အတိုင်းဝယ်​ယူပြီး
1000 GB အထိ ရယူလိုက်​ပါ။
MyTelenor 3.18 app အသစ်က သင့်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ အသွင်အပြင်လက္ခဏာများနဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ယူဆောင်လာပါပြီ။ အခုပဲ download ပြုလုပ်ပြီး အသုံးပြုလိုက်ပါ။
လုံးဝ ဒီဇိုင်း အသစ်
အခု MyTelenor အသစ်မှာ အရမ်းလွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပါဝင်တဲ့အပြင် ပျော်စရာကောင်းပြီး စိတ်လှုပ်ရှားမယ့် ပက်ကေ့ဝယ်ယူပြီးလက်ဆောင်ကံစမ်းခွင့်များ၊ တယ်လီနော စတားကာစတန်မာများအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဘဏ်ကတ်များမှ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ပါသည်။
ဗားရှင်းအသစ်တွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာသုံးနိုင်မည့် QR code ကိုအသုံးပြု၍ဖုန်းငွေဖြည့်သွင်းခြင်း၊ Visa-Master-MPU အစရှိသောဘဏ်ကတ်များမှတဆင့်ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း၊ လက်ကျန်များကိုလွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း၊ ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့် လက်ကျန်ငွေလွှဲပြောင်းမှု အစရှိသည်တို့ မူရင်း စာမျက်နှာတွင်ပါဝင်ပါသည်။
ဖုန်းကို လှုပ်ပြီး အပိုဒေတာလက်ဆောင်တွေယူပါ
MyTelenor App မှ ဒေတာစုဘူး 700MB,850MB, 925MB, 1500MB ကိုဝယ်ယူပြီးဖုန်းကို SHAKE လိုက်တာနဲ့အများဆုံး150GB အထိအပိုဒေတာ လက်ဆောင်တွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စတား ကာစတန်မာများအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များ
ယခု MyTelenor App အသစ်တွင် တယ်လီနောစတား ကာစတန်မာများ အတွက် စတား အဆင့်စစ်ဆေးချက်များ၊ တယ်လီနော၏မိတ်ဖက် ပါတနာများမှ ရရှိနိုင်သော အကျိုးအမြတ်များနှင့် သုံးစွဲနိုင်သောနည်းလမ်းများ ပြည့်စုံစွာပါဝင်ပါသည်။
ယခု MyTelenor App အသစ်တွင် Visa, Master, MPU စသောဘဏ်ကဒ်များဖြစ် ဖုန်းငွေဖြည်သွင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ပါသည်။ (မှတ်ချက်။ ၄င်းဘဏ်များမှ ခွင့်ပြုထားသော ကဒ်များသာအကျုံးဝင်ပါသည်။)
သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးအလုပ်အကိုင်များကို အခမဲ့ရှာဖွေရင်း myjobs.com.mm မှ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်များကို MyTelenor အက်ပလီကေးရှင်းမှာ အခုပဲဖတ်ရှုလိုက်ပါ။
Watch how MyTelenor works
Secure with MyTelenor 3.0
ငွေပေးချေမှု မအောင်မြင်ပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
Visa/Master cards အများအတွက် ကဒ်ထုတ်ဝေသည့် ဘဏ်များ၏ အွန်လိုင်း ငွေပေးချေမှု ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများ လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပေါ် မူတည်၍ အွန်လိုင်း ငွေးပေးချေမှု ဆောင်ရွက်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ MyTelenor app အတွင်းမှ အွန်လိုင်း ငွေပေးချေခြင်း လုပ်ဆောင်မှုမှာ ထိုဘဏ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ကဒ်သုံးစွဲသူ အနေဖြင့် ဘဏ်သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်၍ အသေးစိတ်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ MPU cards များနှင့် ငွေပေးချေနိုင်ရန် အတွက်မူ e-commerce အသုံးပြုခွင့်ကို ကဒ်ထုတ်ဝေသည့် ဘဏ်မှ လျှောက်ထာ၍ ဖွင့်ထားပေးရပါမည်။
ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်၍ ကဒ်ထဲမှ ငွေဖြတ်သွားပါသည်။ သို့သော် ဖြည့်သည့် ငွေပမာဏမှာ ဖုန်းဘေလ်ထဲသို့ ရောက်မလာပါ။
ဤအခြေအနေမှာ ဖြစ်ခဲသော်လည်း သုံးစွဲသူမှ complaint တက်လာပါက TML ဘက်မှ စစ်ဆေး ကြည့်ရှု ပေးပါမည်။ Support team မှ complaint တက်သူ၏ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေး အတည်ပြုရန် တောင်းခံပါ။ ကဒ်ပိုင်ရှင်၏ မိုဘိုင်း နံပါတ် ငွေဖြည့်လိုသည့် မိုဘိုင်း နံပါတ် (အကယ်၍ ကဒ်ပိုင်ရှင်၏ မိုဘိုင်းနံပါတ်နှင့် မတူပါက) ကဒ်အမျိုးအစား (Visa/Master, MPU စသည်) ထုတ်ပေးသည့် ဘဏ်အမည် ကဒ်၏ ငွေကြေး အမျိုးအစား (မြန်မာကျပ်၊ ယူအက်စ် ဒေါ်လာ စသည်) ကဒါ၏ နောက်ဆုံး နံပါတ် ၄ လုံး ငွေပေးချေမှု လုပ်ဆောင်သည့် နေ့ရက် အချိန် အထက်ပါ အချက်အလက်တို့ကိုMyTelenor နှင့်Telenor Pay user team တို့ကို ပေးပို့ပါက ၃ ရက်အတွင်း ဖြေရှင်းချက်ကို ရှာဖွေ၍ အကြောင်းပြန်ပေးပါမည်။
“Save card for next time payment” ဆိုတာ ဘာလဲ။
Visa/Master ကဒ်များအတွက် ကဒ်အသုံးပြုသူများ နောက်တစ်ကြိမ် ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ရာတွင် ပိုမို မြန်ဆန် အဆင်ပြေစေရန် အတွက် ကဒ်၏ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားရန် MyTelenor app အား ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ ကဒ်အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားပါက ကဒ်၏ CVV နံပါတ်နှင့် OTP တို့ကို ဖြည့်သွင်းရုံဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို ပိုမို အဆင်ပြေ မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်။
Referral Program Feature ဆိုတာဘာလဲ ?
MyTelenor app အသုံးမပြုသေးသော user များကို app အသုံးပြုရန်မိတ်ဆက်ပေးချင်းဖြင့် 500MB Free data bonus ရယူခံစားနိုင်သော အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
Referral bonus ဘယ်လိုရယူနိုင်သလဲ?
Party A သည် Party B ကို MyTelenor app စတင်အသုံးပြုရန် မိတ်ဆက်ပေးပြီး Party B က app log in လုပ်ပြီးပြီးချင်း home page မရောက်မီ မလိုအလျောက်ပေါ်လာသော Referral pop up box တွင် Party A ၏ Telenor ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် Party A သည် Referral bonus ရယူနိုင်ပါသည်။
Party A သည် Referral bonus ရကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်ပါသလဲ?
Bonus ရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားစာ SMS ရရှိပါမည်။
Referral bonus ကိုဘယ်သူတွေခံစားခွင့်ရှိပါသလဲ?
Telenor Commercial prepaid နံပါတ်အသုံးပြုသူများသာ ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
Referred ပြုလုပ်သူသည် မည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိနိုင်ပါသလဲ?
500 MB အခမဲ့ဒေတာလက်ဆောင်ကို သက်တမ်း ၅ ရက် ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Party B ကရောမည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိနိုင်ပါသလဲ?
ပထမဆုံး App အသုံးပြုသည့်အတွက် အများ ဆုံး 10 GB အထိရရှိနိုင်သော ဒေတာလက်ဆောင်များရရှိနိုင်ပါမည်။
သက်တမ်းမှာ ၂၀၂၀ ခု ၊ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ (ထပ်မံမကြေငြာသ၍) ဖြစ်သည်။
တစ်ရက်တာအတွက် Referral အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားပါသလား?
Shal Shake Voice Pack
Voice ရှယ်ရှိတ်ဆိုတာဘာလဲ။ Bonus တွေဘယ်လိုရရှိမှာလဲ။
Shal Shake Voice Packs တွင် တယ်လီနောအချင်းချင်း 3000 Seconds , 5400 Seconds နှင့် 5500 Seconds Voice package များကို ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MyTelenor application ကနေဝယ်မှသာ shal shake ခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပက်ကေ့ဝယ်ပြီးတာနဲ့ shal shake pop up လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ဖုန်းကိုလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဗလာမပါ ဒေတာလက်ဆောင်တွေရရှိမှာပါ။
Package ၃ ခုကနေ ရရှိမည့် ဒေတာလက်ဆောင်တွေကတူမှာလား။
ရရှိမည့်လက်ဆောင်တွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် Telenor to Telenor 3000 Seconds package ကိုဝယ်ယူပြီး 10 GB အထိဒေတာလက်ဆောင် Telenor to Telenor 5400 Seconds package ကိုဝယ်ယူပြီး 20 GB အထိဒေတာလက်ဆောင် Telenor to Telenor 5500 Seconds package ကိုဝယ်ယူပြီး 150 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်
ဒေတာလက်ဆောင်ရဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့သက်တမ်းက (၅) ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးမပြုရသေးတဲ့ဒေတာတွေက (၅) ရက် ကျော်သွားရင် ပယ်ဖျက်သွားမှာလား။
အသုံးမပြုရသေးတဲ့ဒေတာလက်ဆောင်တွေကို (၅) ကျော်သွားရင် ပယ်ဖျက်သွားမှာပါ။ (၅) ရက်မတိုင်ခင် နောက်ထပ် Package ထပ်မံဝယ်ယူပြီး ရရှိသော Bonus နှင့်ပေါင်းကာသက်တမ်းတိုးနိုင်ပါတယ်။
Shal Shake Voice Packs နှင့် Data Shal Shake bonus ၂ ခုက ရရှိပြီးရင် ပေါင်းသွားမှာလား။
Bonus ၂ ခုမှာ မတူညီသဖြင့် ပေါင်းမသွားပါ။
Shal Shake Voice Packs ကိုဘယ် Version မှာစတင်အသုံးပြုနိုင်မှာလဲ။
MyTelenor App Version 3.9 မှစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
Multi-account ဆိုသည်မှာ တယ်လီနော၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို မိမိချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက် မိမိဖုန်းထဲမှတစ်ဆင့်ကိုယ်တိုင်စီမံပေးနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ကိုစီမံသကဲ့သို့ ဖုန်းလက်ကျန်စစ်ခြင်း၊ ငွေဖြည့်သွင်းပေးခြင်း၊ ပက်ကေ့ဝယ်ယူပေးခြင်း အစရှိသောဘယလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို စီမံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
Multi-account လုပ်ဆောင်ချက်သည် Prepaid ဖုန်းနံပါတ်များအတွက်သာအကြုံးဝင်ပါသလား?
မဟုတ်ပါ၊ တယ်လီနောဖုန်းကိုင်ဆောင်သော prepaid, postpaid နံပါတ်များအားလုံးအသုံးသည် ထည့်သွင်းချိတ်ဆက်လိုက်သောနံပါတ်မှ OTP တစ်ခါသုံးကုဒ် အတည်ပြုချက်ရယူပြီး ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
၁- တယ်လီနောအပလီကေးရှင်းအသုံးမပြုထားသောနံပါတ်များအတွက် မရှိပါ၊
ကျွန်ုပ်၏ multi-account လုပ်ဆောင်ချက်အတွင်းသို့ နံပါတ် မည်မျှထည့်သွင်းနိုင်သလဲ?
အများဆုံး နံပါတ် ၅ ခုအထိထည့်သွင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
အခြားသူတစ်ယောက်က မိမိ၏နံပါတ်ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုထားမှုအား ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသလား?
သင်ကိုယ်တိုင် တယ်လီနောအပလီကေးရှင်းထဲမှ အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြီး သင့်နံပါတ်နေရာကိုနှိပ်၍ ချိတ်ဆက်ထားမှုအား ဖယ်ရှားနိုင်ပါသည်။
Multi-account စီမံခန့်ခွဲမှုအား တယ်လီနောအပလီကေးရှင်း ဗားရှင်းအားလုံးတွင်သုံးနိုင်ပါသလား?
မရပါ၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို MyTelenor app ဗားရှင်း 3.18 နှင့်အထက် ဗားရှင်းများတွင်သာအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
MyTelenor App ဆိုတာဘာလဲ?
MyTelenor App သည် Telenor သုံးစွဲသူများအတွက် Telenor ၏ သတင်းအချက်များကို သိရှိစေနိုင်ရန်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို တစ်နေရာတည်းတွင် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သော Application တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
MyTelenor App ကိုဘယ်လို download လုပ်ယူနိုင်မလဲ?
Telenor သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် MyTelenor App ကို Telenor App Store တွင် အခမဲ့ download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်။ MyTelenor App ကို Google Play Store နှင့် iTunes Store တို့တွင် “MyTelenor” key word ဖြင့် ရှာဖွေကာ download ရယူနိုင်သလို mytelenor.com.mm/app မှနေလဲ တိုက်ရိုက်အခမဲ့ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
MyTelenor မှာ ဘာတွေအသစ်ပါဝင်ပါသလဲ ?
MyTelenor အသစ်မှာ အရင်ပါနေကျ QR code နဲ့top up လုပ်တာ balance transfer လုပ်တာ call me back ပို့တာတွေအပြင် package ဝယ်တိုင်း reward တွေရမယ့် shal reward, Shal Suboo 700MB ဝယ်တိုင်းရမယ့် Shal Shake အပါအဝင် Star Members တွေအတွက် rewards တွေတခါထဲ redeem လုပ်လို့ရမယ့် features တွေပါဝင်ပါတယ်
Top up ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ ?
App ဖွင့်ဖွင့်လိုက်ခြင်းပေါ်လာတဲ့ထဲက QR ဆိုတဲ့ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ တခါထဲ QR နဲ့ top up လုပ်လို့ရသလို top up ထဲသွားပြီးတော့ voucher code/QR နဲ့လဲ သွားပြီး top up လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်
Balance transfer ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ ?
App ဖွင့်ဖွင့်လိုက်ခြင်းပေါ်လာတဲ့ထဲက ငွေလွှဲရန် (သို့) balance transfer ကိုနှိပ်ပြီးတော့ ငွေလွှဲနိုင်ပါတယ် ငွေလွှဲတဲ့အခါ အရင်လွှဲခဲ့တဲ့ record တွေရှိလို့ tap လုပ်လိုက်ရင် အရင်လွှဲတဲ့သူနဲ့ အရင်လွှဲတဲ့ amount အတိုင်းလဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန်လွှဲနိုင်ပါသေးတယ်
အောက်က bottom navigation bar လေးမှာ ပက်ကေ့များ (သို့) Packs ကိုသွားလိုက်ရင် တယ်လီနောကနေ ဝယ်လို့ရမယ့် ပက်ကေ့တွေကို တခါထဲကြည့်လို့ရမှာပါ ပုံမှန် ပက်ကေ့တွေအပြင် အခြား powerload လို တယောက်ခြင်းစီအတွက် အကောင်းဆုံး ပက်ကေ့တွေကိုလဲ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် home page မှာ လဲ အသင့်တော်ဆုံး My Best Offers တွေကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်
Plan တွေကို ဘယ်လို ပြောင်းနိုင်မလဲ ?
App ကို ဖွင့်ပြီးတော့ အောက်ခြေ bottom menu က အကောင့်အောက်ကိုသွားလိုက်ရင် ယူထားတဲ့ plan တွေ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ pack ဘယ်နှခုရှိလဲကိုကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အဲဒီကနေတခါထဲ ဖုန်းပြောတဲ့ပလန်တွေ ဒေတာပလန်တွေ ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
MyTelenor ကို ဘယ်ဘာသာစကားတွေနဲ့ သုံးလို့ရနိင်မလဲ ?
MyTelenor ကို ဇော်ဂျီ ယူနီကုတ် English language settings တွေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ဘာသာစကားပြောင်းလဲဖို့ log in မဝင်ခင်ထဲကပြောင်းနိုင်သလို Help > Change language ကနေလဲ သွားရောက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်
MyTelenor ကို အခမဲ့သုံးနိုင်ပါသလား ?
MyTelenor သုံးစွဲမှုအတွက် ဒေတာကောက်ခံခြင်းမရှိပါဘူးနော် ဒေတာဖွင့်ပြီးသုံးစွဲရမယ့် application မို့လို့ ဒေတာဖွင့်ထားချိန်မှာတော့ အခြား app တွေက သုံးစွဲတဲ့ဒေတာ တွေကိုတော့ သတိထားပေးပါ
ဘေလုံးဝမရှိတဲ့အချိန်မှာ MyTelenor ကို အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါ့မလား ?
ဘေအရမ်းနည်းနေလဲ မပူပါနဲ့ MyTelenor ကို သုံးပြီးတော့ ငွေဖြည့်တာ ပက်ကေ့ဝယ်တာ ကြိုသုံးချေးငွေရယူတာတွေ လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်နော်
Data Shal Shake ဆိုတာဘာလဲ။
Data Shal shake တွင် Shal Suboo 700MB, 850MB, 925MB နှင့် 1500MB များကို ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး MyTelenor application ကနေဝယ်မှသာ shal shake ခံစားခွင့်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပက်ကေ့ဝယ်ပြီးတာနဲ့ shal shake pop up လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ဖုန်းကိုလှုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဗလာမပါကံစမ်းမဲတွေ ရရှိမှာပါ။
Package ၄ ခုကနေ ဒေတာလက်ဆောင်တွေ အတူတူရမှာလား။
ရရှိမည့်ဒေတာလက်ဆောင်တွေကတော့အနည်းဆုံး 50 MB မှအများဆုံးအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ShalSuboo 700 MB Package ကိုဝယ်ယူပြီး 50 GB အထိဒေတာလက်ဆောင် ShalSuboo 850 MB Package ကိုဝယ်ယူပြီး 100 GB အထိဒေတာလက်ဆောင် ShalSuboo 925 MB Package ကိုဝယ်ယူပြီး 150 GB အထိဒေတာလက်ဆောင် ShalSuboo 1500 MB Package ကိုဝယ်ယူပြီး 300 GB အထိဒေတာလက်ဆောင်
ဒေတာလက်ဆောင်ရဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့သက်တမ်းက (၇) ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးမပြုရသေးတဲ့ဒေတာတွေက (၇) ကျော်သွားရင် ပယ်ဖျက်သွားမှာလား၊
အသုံးမပြုရသေးတဲ့ဒေတာတွေက (၇) ကျော်သွားရင် ပယ်ဖျက်သွားမှာပါ။ (၇) ရက်မတိုင်ခင် Shal Shake မှနောက်ထပ် Package ထပ်မံဝယ်ယူပြီးရရှိသော Bonus နှင့်ပေါင်းကာသက်တမ်းတိုးနိုင်ပါတယ်။